ग्रेटर टुडिखेलका नाममा माफिया
अधिवक्ता शिव सिग्देल----
जमलमा नमूना राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने योजना तैयार भयो । नक्सा पनि पास भइसकेको छ । यो योजनाका लागि २ करोड खर्च भइसकेको छ ।
यो पुस्तकालय बनेपछि दैनिक १० हजार पाठकले पुस्तकालयको लाभ उठाउन सक्ने छन् । भूकम्पले हरिहर भवनस्थित राष्ट्रिय पुस्तकालय भत्कियो । त्यहाँ रहेका बहुमुल्य पुस्तकहरु पानीमा भिजेको र यत्रतत्र छरिएका फोटोहरु सार्वजनिक भएका छन् । पुस्तकको नष्ट बिनष्ट दृश्यले सरकार शिक्षाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाएको छ ।
सरकारले पुस्तकालय बनाउनका लागि १० करोडको सुरु बजेट छुट्याएको पनि हो तर एकाएक राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले ग्रेटर टुँडिखेलको योजना बाहिर ल्यायो । जमलदेखि त्रिचन्द्र कलेज पनि भत्काउने र टुँडिखेलसम्मलाई खुला क्षेत्र बनाउने । यसैवीच मन्त्रिपरिषदले पुस्तकालय निर्माण योजनालाई स्थगित गराउने निर्णय गरेको छ । यसभित्र भूमाफियाको चलखेल भएको र यी क्षेत्रमा ठूला ठूला व्यापारिक मलहरु बनाउने सोच अघि सारिएको छ । पहिले पुस्तकालय, पछि ग्रेटर टुँडिखेल र अहिले व्यापारिक भवन बनाउने योजना भन्नु नै भूमाफियाको जालोमा सरकार परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नछाड्नेले राजधानीको केन्द्रमा रहेका यी जग्गाहरुमा ¥याल काढ्नु स्वभाविक हो ।
जमलमा ८ रोपनी जग्गा छ । यसमा पुस्तकालयको साटो व्यापारिक भवन बनाउन सके ठूलो लाभ हुनेछ भनेर ठूलै लेनदेन हुनथालेको देखिन्छ । सरकारी जग्गाहरु निजी संस्थाहरुलाई कौडीको भाडामा दिने र भित्री लाभ लिने षडयन्त्रलाई रोक्न कसले ?
मूल कुरो राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन कता ? यसको निक्र्यौल तत्काल जरुरी देखिन्छ । त्यसपछि ग्रेटर टुँडिखेल कि व्यापारिक भवन ? कारण पारदर्शी रुपमा छलफलमा आउनुपर्छ र माफियाकरण कुनै हालतमा हुनुहुन्न ।
सरकार चलाउने र राजनीति गर्नेले नै भूमाफियाकरण चलाउँदा त्यसै पनि सरकार धेरै बदनाम भइसकेको छ । अव पनि बदनाम हुनु भनेको जनाक्रोश बढाउनु हो, आन्दोलन निम्त्याउनु हो ।